साहित्य / संस्कृति Archives - Pahilo Online
बिहीबार, ९ मंसिर २०७८, २१:३५
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरेका बामपन्थी अगुवा तथा अग्रज समाजसेवी तिलक वान्तवा राईको स्मृतिमा प्रकाशित पुस्तकको विहीवार १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले लोकार्पण गरेका छन् । तिलक वान्तवा राई स्मृति
बिहीबार, २५ कार्तिक २०७८, ०८:१०
भूमिप्रसाद पाठक शनिश्चरे । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. ४, जरायोटोलस्थित राधाकृष्ण मन्दिरको पाँचौं साधारणसभा अत्यन्तै भव्य र सभ्य ढंगले सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न साधारणसभाका प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष
बुधबार, १० कार्तिक २०७८, १८:०९
साइंली हामी छटौं अब बाचा कसम तोडौं अब नाता साइनो छोडौं अब । युग फेरियो समय बदलियो सबथोक फेरी उस्तै भयो । तिमी तल्लो जातकी, म माथिल्लो जातको चिनारी फेरी
व्यवसायी र म
सोमबार, ११ आश्विन २०७८, २०:५९
कविता तिमी व्यवसायिक समूह बनाऊ म सामाजिक समूह बनाउँछु । तिमी मुनाफा कमाऊ म समाजसेवा गर्छु । तिमी आफुलाई केन्द्र बनाऊ म सबैको हित चाहन्छु । तिमी गुट बनाऊ म
यलम्बर चोकमा राजा यलम्बरको सालिक निर्माण कार्यको शिलान्यास
सोमबार, २४ जेष्ठ २०७८, ००:३६
पथरी शनिश्चरे । मोरङको पथरी शनिश्चरे १ स्थित यलम्बर चोकमा किरात समुदायका प्रथम ऐतिहासिक राजा यलम्बरको सालिक निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १५
धिमाल जातिको ग्रामथान क्षेत्र संरक्षणको माग सहित आदिवासी जनजाती महासंघको विज्ञप्ति
आईतवार, १६ जेष्ठ २०७८, २१:२१
कानेपोखरी । मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेको धिमाल जातिको ग्रामथान क्षेत्र बिनास गर्न खोजिएको भन्दै संरक्षणको माग सहित आदिवासी जनजाती महासंघ कानेपोखरीले ध्यानाकर्षण एक विज्ञप्ति मार्फत प्रस्तुत
मंगलवार, ११ जेष्ठ २०७८, २०:४६
कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाँउपालिकामा आदिमकाल देखि धिमाल समुदाय बसोवास गर्दै आएका छन् । धिमाल समुदायको इतिहास, संस्कृति र जीवन शैली वन जंगल, खोला नाला लगायत प्रकृतिसँग जोडिएको छ ।
२ दिने जलरंग महोत्सव सम्पन्न
सोमबार, ३ फाल्गुन २०७७, १८:२५
पथरी शनिश्चरे । सृजनशील गतिविधिमा सक्रिय बन्दै आएको मोरङको पथरी शनिश्चरेमा स्थानीयको उत्साहपूर्वकको सहभागितामा कला र पर्यटनलाई जोड्दै ‘पथरी शनिश्चरे जलरङ्ग महोत्सव २०७७’ सम्पन्न भएको छ । २ दिने महोत्सवको
आईतवार, २ फाल्गुन २०७७, ०६:५६
पथरी शनिश्चरे । सृजनशील गतिविधिमा सक्रिय बन्दै आएको मोरङको पथरी शनिश्चरेमा आज स्थानीयको उत्साहपूर्वकको सहभागितामा कला र पर्यटनलाई जोड्दै ‘पथरी शनिश्चरे जलरङ्ग महोत्सव २०७७’ सुरु भएको छ । २ दिने